दर्शकहरूले फिल्म कि अभिनेता मुख्यतया पौराणिक comedic भूमिका klutz र henpecked Hobotova थाहा "द Pokrovsky गेट्स।" अनातोली Ravikovitch व्यापक दिग्गज फिल्म Mihaila Kozakova गरे पछि। तथापि, उहाँलाई पछि फिलिम मा शूटिंग को समय पहिले नै चलचित्रमा धेरै भूमिकाको र थिएटर मा काम लगभग बीस वर्ष भएको थियो। यस उल्लेखनीय अभिनेता को जीवनी र आफ्नो हार्ड व्यावसायिक भाग्य यो लेख समर्पित छ।
कठिन समयमा अनातोली जन्म Ravikovitch थियो। अभिनेता को जीवनी तर आफ्नो भाग्य मनन गर्न सकेन जो सोभियत इतिहास मा कठिन चरणमा, गले। Ravikovitch Leningrad मा 1936 मा जन्म भएको थियो। अभिनेता को आमाबाबुले नागरिक युद्ध, को NEP अवधि, भोक र दुःख को अस्थिरता बाँचे। सेना बच्चाहरु मा राख्न, खुवाउन मात्र पर्याप्त छ। आफ्नो युवा, शिक्षा र यहूदी उच्चारण आफ्नो कमी को लजालु अभिनेता मा। तर पछि, यो उहाँ सम्झनुहुन्छ अनातोली Ravikovitch तीव्र दोषी आफ्नो आमाबाबु अगाडि अनुभव। दुर्भाग्यवश, समय उल्टाउन सकिँदैन।
Ravikovitch एक पटक कालिगढहरु र गरिब अधिकारीहरु थिए जहाँ Leningrad, को inconspicuous क्षेत्रको एक बस्थे। तर आफ्नो मूल स्पिनिङ सडक मा अभिनेता को बाल्यकाल को दिन मा म एक गरिब बस्थे। परिवार चार कोठा मध्ये एक कम्युनल अपार्टमेन्ट मा huddled। आवास मा स्थिति, को पाठ्यक्रम, खराब थियो। थियो भने घर मा एक स्नान रूपमा स्नान गर्न जान म थियो हरेक हप्ता, यो पनि क्रान्तिको अघि, देखिन्छ। जब धेरै वर्ष पछि, उहाँले एक कम्युनल अपार्टमेन्ट, जहाँ, फिल्म "द Pokrovsky गेट्स" अनुसार सधैं मजा छ र वातावरण धेरै घनिष्ठ छ जीवन लागि तिर्सना उपस्थित कि बारे अनातोली Ravikovitch जवाफ पत्रकार 'प्रश्न, उहाँले भन्नुभयो: "नछुटाउनुहोस्! , श्राप! "
गर्मी परिवारको लागि Ravikovitch Glukhov मा नातेदार गर्न बन्द सेट। त्यसैले यसलाई चालीस पहिलो वर्ष थियो। मेरो बुबा मात्र Leningrad मा रह्यो। उहाँले गर्मी देखे के बाट अनातोली Ravikovitch पूर्व गर्न पश्चिमी युक्रेन बाट पठाइयो मानिसहरू, को विशाल प्रवाह सम्झे। केही चर्चा पछि, आमा र आफन्त आफू र आफ्ना छोराछोरीलाई सुरक्षित गर्न, छोड्न निर्णय गरे।
Ravikovitch त्यसपछि मात्र चार वर्ष पुरानो थियो, तर उहाँले कहिल्यै वयस्क जसको थियो छलफल गर्दै छन्, आकाश मा अनौठो विमान भूल, थियो र त्यसपछि - हाम्रो वा जर्मन। उहाँले स्पष्ट पनि फट पछि अझै स्पष्ट थियो कि सम्झना यो विमान, कि "छैन हाम्रो।" लामो wanderings र vicissitudes पछि, जो बीच मात्र सामान हानि, एक विशाल यहूदी परिवार अझै पनि साराटोभ पुगेको थियो।
युद्ध वर्ष को आफ्नो सम्झनाहरु समयमा अनातोली Ravikovitch उहाँले मुख्यतया आफू र आफ्नो प्रियजनलाई बारेमा सोच जसले हुनेछ एक एकल व्यक्ति देखेको थिएन सबै समय मा कि एक पटक भन्दा बढी भन्नुभयो। सबैलाई बच्न खोजिरहेका थिए। भावुक देशभक्ति विचार भविष्यमा अभिनेता घेरिएको गर्नेहरूलाई मा खडा छैन। साराटोभ मा, आफ्नो आमा, बहिनी र भाइ संग अनातोली चालीस चार हुन बस्थे।
आफ्नो पैतृक शहर फर्केपछि पछि यो आफ्नो अध्ययन जारी थियो। "कतै हालियो, दस वर्षसम्म।": बारेमा स्कूल अनातोली Ravikovitch निम्नानुसार कुरा बारेमा अभिनेता को आफ्नो जीवनी यो अवधि उहाँले पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न इच्छा अभाव हुँदा एक समय रूपमा भन्नुभयो। इतिहासको ब्याज र Ravikovitch सही विज्ञान को पनि धेरै उहाँले संस्थान मा अध्ययन गर्दा, त्यसपछि पहिले नै awoke। के अभिनय प्रतिभा बारेमा भने गर्न सकिन्छ।
अभिनेता गरेको प्रतिभा को मूल
यस सिनेमा अर्को यात्रा पछि अनातोली प्रसिद्ध चलचित्र वर्ण चित्रण आफ्ना comrades मनोरंजन। एकै समयमा, त्यो आमा, सधैं श्रद्धा संग थिएटर कला बुझाउँछ कि यस्तो शानदार सफलता थियो कलात्मक अभिव्यक्ति को एक सर्कल मा, उनको छोरा पायनियर्स घर लगे। तब देखि, साहित्य र थिएटर जीवन अनातोली मुख्य स्थान लियो।
Anatoliem Ravikovichem अघि अन्तिम वर्षमा अर्को के को असहमत मुद्दा उभिए? त्यहाँ प्राप्त गर्न असम्भव थियो प्रतिष्ठित कलेज हो। पहिले, उहाँले एक उत्कृष्ट विद्यार्थी रहेको टाढा थियो। दोस्रो, प्रश्नावली मा पाँचौ वस्तु यसलाई विज्ञान मन्दिरको सबै ढोका बन्द गरिएको छ। शैक्षणिक विश्वविद्यालय विशेष मांग आनन्द नगर्ने रह्यो। तर यो सपना अनातोली Ravikovitch। फेरि फिर्ता unloved स्कूलमा, तर एउटा फरक भूमिका, यो उहाँको योजना भाग हो।
यो नाटक सर्कलमा आफ्नो नियमित भ्रमणमा बाबजुद, एक अभिनेता बन्न, कि भने हुनुपर्छ, उहाँले सपना देख्यो कहिल्यै। र व्यवस्थापक नाटक स्कूल जाने प्रयास गर्ने प्रस्ताव गर्दा, यो एनाटोलिया एउटा आश्चर्य थियो।
आमाबाबुको 'मनसाय देखि लुक्दै, त्यो Leningrad थियेटर संस्थानमा लागू गरियो। र म पनि अघि प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय को विद्यार्थीहरूको खराब Jokes सिकार थियो किनभने तिनीहरूले, बुरी तरिका असफल छ, भन्न पर्छ। कला मन्दिरमा एक पटक एनाटोलिया आफूलाई शिक्षकहरू पहिचान गर्ने दुई युवा पुरुष, भेटे। मात्र होइन, तिनीहरू विद्यार्थी र वास्तविक शिक्षक र fro, scurrying जहाँ लबी, मा Chekhov कथा सही पढ्न भविष्य प्रवेशकों गर्न बाध्य छन्। तर तिनीहरूले पनि यसलाई सबैभन्दा उपयुक्त वीर manly छवि छ भनेर उहाँलाई विश्वस्त गर्न सक्षम थिए।
एक स्वगत Tarasa Bulby पढ्न भइरहेको अघि चयन समिति को फलस्वरूप। यो परीक्षण जवान गर्ने कडा formidable बुबा फोटो प्रयास गरिरहेको छ द्वारा रोमाञ्चित थियो। तर बाहेक आवेदक को टोन मा झर्ने बिना, एक धेरै देशभक्ति गीत गाए र जोर र जोर चीख़ गर्दा आफ्नो नाम खुसी सूचीमा गरे। तर केवल अवस्था मा उहाँले एउटा अभिनेता-हास्य अभिनेता को makings विकास गर्न जारी गर्नेछ।
स्नातक पछि अनातोली Ravikovitch कास्ट काम विशेष मूल्यवान छैन जो एक रिमोट प्रान्तीय टाउन, मा पठाइएको थियो। को स्थानीय उच्च कला टाढा थिए। उहाँले धेरै कठिनाइ अभिनेता अनातोली Ravikovitch overcame। आफ्नो जीवनी अवधि यति गर्दा यस्तै सामना, शायद, लगभग हरेक इच्छुक अभिनेता अप दिइएको, कि हुनेछ छ र आफ्नो पेशामा अन्त राख्न भारी समावेश छ। Ravikovitch तर त्यसो भएन, र चाँडै भाग्य उहाँलाई मुस्कुराया। एक भाग्यमानी दुर्घटना धन्यवाद, उहाँले त्यो बीस-पाँच वर्ष को लागि काम जहाँ Leningrad शहर परिषद, इवान Vladimirov थिएटर को कम्पनी मा थियो। यहाँ Ravikovitch Marmeladova, Sancho Panza, र अन्य धेरै क्लासिक वर्ण प्ले।
प्रदर्शन दर्शक संग अविश्वसनीय सफलता थियो। मान्छे "अपराध र सजा" को उत्पादन मा प्राप्त गर्न लामो लाइनहरू उभिएर, "Dulcinea डेल Toboso", "Lefty," "Pygmalion" र अरूलाई। सबैभन्दा हडताली आंकडा यस थिएटर मा तथापि, आफ्नो प्रतिभा बावजुद, सधैं धेरै कौशलतापूर्वक, बौद्धिक गऱ्यौ छ जो Alisa Freundlich थियो। उनको जीवनकालमा संग Ravikovitch न्यानो र अनुकूल सम्बन्ध कायम। र थिएटर अभिनेता को पर्खालहरु भित्र अनातोली Ravikovitch पनि आफ्नो व्यक्तिगत आनन्द फेला परेन।
"के बच्चाहरु र कार्लसन"
भविष्यमा पत्नी Anatoliya Ravikovicha आफ्नो बीस वर्ष भन्दा मुनिका थियो। यो संग, त्यो प्ले "के बच्चाहरु र कार्लसन" प्ले। अभिनेता 1980 मा Irina Mazurkiewicz विवाह गरे। Ravikovitch मा काँध पछाडि उहाँले पहिले नै विवाहित थियो। र आफ्नो परिचय को समयमा Irina पहिले नै विवाह थियो। तर सबै बाधाओं र अधिवेशनमा विजेता को आपसी भावना। Ravikovitch एक विशाल घर छोडेर जवान पत्नी एउटा सानो कोठा मा सारियो। र पछि तिनीहरूले छोड्न भएन। र आठ वर्ष विवाह पछि अभिनेता को कमेडी थिएटर, अन्ततः नेतृत्व लिनुभयो जहाँ काम गर्न गए। तर मानिसहरू नाटकीय कला टाढा, तैपनि छैन Ravikovitch अनातोली रूपमा यस्तो नाम भन्न भएन।
स्क्रिनमा पहिलो पटक, अभिनेता 1974 मा देखियो। त्यसपछि एक ऐतिहासिक फिल्मस्ट्रिप मा एक सानो भूमिका अनातोली Ravikovitch प्ले। आफ्नो Filmography र पछि वर्ष मा भूमिकाको को एक धेरै stingy सूची थियो। तर, भाग्यवस, 1982 मा, द्वारा निर्देशित एम Kozakov तिनले फिलिम मा भाग लिन निमन्त्रणा "द Pokrovsky गेट्स।" फिल्म तुरुन्तै आलोचकहरु र दर्शकहरुको मूल्यांकन भएको छैन। कुनै ध्यान उनको केही गलतफहमीले द्वारा। यो केवल वर्षपछि यो फिल्म एक पंथ भएको छ थियो, र वर्ण को बयान क्याच वाक्यांश भएका छन्।
लामो समय को लागि Klutz छवि आफ्नो भूमिका Hobotova लागि Ravikovitch लागि तय भएको थियो। थप कठोर, निर्णायक र व्यावहारिक - तर, एक अभिनेता जीवन मा यो फरक थियो। आफ्नो लोकप्रिय चलचित्र वर्ण संग एकतामा बाँध्ने Anatoli Yurevich मात्र कुरा हो, एक जवान महिला प्रेम छ। उनको खातिर उहाँले एक समयमा, नायक गए जस्तै, यो, यो लापरवाह कार्यहरू मा जस्तो थियो। "Pokrovsky गेट्स" को सफलता पछि चलचित्र Ravikovitch Anatoli Yurevich धेरै भूमिकाको प्ले छ।
अभिनेता चालीस भन्दा बढी चलचित्रमा संलग्न थियो। उहाँले संलग्न गरिएको छ फिलिम जो सबै भन्दा प्रसिद्ध फिलिमहरु समावेश:
"को Baskervilles को हाउन्ड।"
"यो Eccentric एन्डरसन।"
"Prohindiada, स्पट वा चलिरहेको।"
"म अपरिचित रुकती।"
"हथौडा र Sickle।"
"टूटे रोशनी-1 को स्ट्रिट्सहरू।"
"आशा को घर"।
2008 मा उहाँले प्रसिद्ध सोभियत र रूसी अभिनेता को memoirs एक पुस्तक प्रकाशित। यसलाई मा लेखक आमाबाबु, स्कूल आफ्नो बाल्यकाल सम्झनाहरु प्रतिबिम्बित र नाटक सर्कल भाग। पुस्तक जीवन्त कलात्मक भाषा लेखिएको छ। जीवन अनातोली Ravikovitch महत्त्वपूर्ण घटनाहरू ठीक विडंबना संग चित्रण जो, सायद, एक मानिस मात्र गर्न सक्छन् प्रतिभाशाली, तर बुद्धिमान् र दयालु।
1988 मा, अभिनेता को RSFSR को जनता कलाकार को शीर्षक सम्मानित गरिएको थियो। अनातोली Ravikovitch अप्रिल 8 एक सेन्ट पीटर्सबर्ग अस्पतालमा लामो रोग पछि मृत्यु, 2012। स्मारक सेवा कमेडी को थिएटर मा आयोजित थियो। पछिल्लो शब्द Alisa Freundlich, ओलेग Basilashvili र अन्य उल्लेखनीय अभिनेता र मित्र Ravikovitch uttered। दिन stalls, थिएटर र सिनेमा को छैन केवल मान्छे, तर पनि सरल Petersburgers भरिएको थियो। को Neva मा शहर वसोवास सयौं मनपर्ने अभिनेता विदाई भन्न आए। आफ्नो भूमिकाको सोभियत र रूसी सिनेमा को इतिहास को भाग भएका छन्। Ravikovitch वर्ण, र सबै लेवी Evgenevich Hobotov माथि, सधैंभरि राष्ट्रिय सिनेमा हरेक Admirer को हृदयमा प्रविष्ट गर्नुभयो।
माइकल Shirvindt: आफ्नो बुबाको छाया मा एक जीवनी
Arshavin Andrey: जीवनमा गल्ती गर्न नडराऊ
Maksimova Tamara: जीवनी, रोचक तथ्य र तस्बिरहरू
Abdel Cellou: लेखकले एक जीवनी र काम को समीक्षा
एरिक ट्रम्प:5हट तथ्य
बढ्न लसुन कसरी - सुझावहरू
Kefir संग Pies लागि खमीर आटा। खमीर आटा संग नुस्खा केक
महिला मा बाँझोपन को कारण
आकर्षण पेपहस। सुन्दर ठाँउ
कसरी तपाईंको TV मा आफ्नो स्मार्टफोन जडान गर्न? तपाईंको TV मा आफ्नो स्मार्टफोन जडान
प्रभावशाली भिडियो ब्लग लागि शीर्ष5उपकरण
जीवविज्ञानी सक्रिय additive "प्रोलिट": प्रयोगको लागि निर्देशनहरू
मानिस-ब्वाँसा - तिनीहरू को हुन्? मानिस एक ब्वाँसो मा गरिएका